January 11, 2019 at 09:57 Saakay iyo waxyaabihii ay Wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda2019-01-11T09:57:41+00:00 CAYAARAHA
(Europe) 11 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Chelsea ayaa iska diiday dalab kaga yimid Barcelona oo ku aadan weeraryahankooda reer Brazil Willian 30-jir heshiis uu weliba qeyb ka yahay xiddiga dhalasho wadaaga la ah ee Malcom 21-jir kaa oo dhanka kale u weecanaya. (Telegraph)
Chelsea ayaa wada wada hadalo ay amaah kula soo saxiixaneyso Gonzalo Higuain inta ka harsan kal ciyaareedkan, inkastoo ay Juventus doorbideyso inay gaarto heshiis ay si joogta ah isaga iibineyso 31-jirka reer Argentina.(Telegraph)
Xiddiga reer England ee garabka kaga ciyaara Borussia Dortmund Jadon Sancho, 18-jir ayaa doonaya inuu la sii joogo kooxda reer Germany iyadoo ay jirto warar la xiriirinaya inuu dib ugu soo laabanayo Premier League. (Mail)
Everton ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo xiiseynaya saxiixa weeraryahanka reer Belgium ee kooxda Chelsea Michy Batshuayi kaddib markii la soo yareeyay heshiiska amaahda uu 25-jirka ku joogay Valencia.(Telegraph)
Crystal Palace iyo Fulham ayaa sidoo kale xiiseynaya saxiixa Batshuayi. (Mirror)
Newcastle United ayaa kula soo biirtay Liverpool tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga qadka dhexe Trabzonspor ee Abdulkadir Omur. 19-jirka ayaa lagu naaneysoaa Lionel Messi-ga Turkiga. (Sun)
Bartilmaameedka Chelsea Nicolo Barella ayaa doonaya inuu iska diido inuu bishan u dhaqaaqo Stamford Bridge, Maurizio Sarri ayaa diyaarinayay inuu 45-milyan ku soo iibsado 21-jirka qadka dhexe Cagliari. (Tutto Mercato)
Xiddiga qadka dhexe reer Spain iyo Manchester United Juan Mata, 30-jir ayaa sheegay inuusan garaneyn halka uu yaalo mustaqbalkiisa iyadoo qandaraaskiisa Old Trafford uu dhici doono suuqa xagaaga. (AS)
Madaxwaynaha Benfica Luis Filipe Vieira ayaa doonaya in macalinkii hore ee Manchester United Jose Mourinho uu kala hadlo inuu dib ugu soo laabto dhulkiisa hooyo si uu kooxda tababare ugu noqdo. (A Bola)
Yeelkeede, Mourinho ayaa meesha ka saaray inuu dib ugu laabanayo Portugal. (Correia de Manha)
Real Madrid ayaa weli xiiseynaysa inay tababaraheeda hore ee Mourinho keento Bernabeu, laakiin Manchester United ayaa 10-milyan waydiisan doonta kooxda reer Spain haddii ay doonayaan inay dib u shaqaaleysiyaan Jose. (Sun)
Tottenham ayaa dooneysa inay la soo saxiixato xiddiga qadka dhexe reer Austria iyo kooxda Hoffenheim Florian Grillitsch, 23. (Sky Sports)
Daafaca reer Spain ee garabka bidix kaga ciyaara Liverpool Alberto Moreno, 26-jir ayaa u sheegay Reds inuusan dooneyn inuu qandaraaskiisa cusbooneysiyo isla markaana uu doonayo inuu dib ugu laabto La Liga. (Estadio Deportivo)
Chelsea ayaa wada hadalo hormarsan kula jirta naadiga Zenit oo ku aadan xuddiga qadka dhexe reer Argentina Leandro Paredes, 24-jir. (Sportitalia)
« Unai Emery oo niyad jab ku riday jmaahiirrta kooxda Arsenal
Kadib markii la shaaciyay in Jose Mourinho uu falanqeeye ka noqon doono kanaalka Bein Sports Abu Tarika oo qoraal yaab leh bogiisa soo dhigay. »